Ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ejele osolwa kwelakwa-KFC | News24
Ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ejele osolwa kwelakwa-KFC
Pretoria - UMarius Harding osekunguye yedwa umsolwa ecaleni lokushaya izithandani ngaphandle kwasesitolo esidayisa inyama echochombisiwe, u-KFC, uthi uyahlukumezeka futhi webelwa nezimpahla zakhe ejele iKgosi Mampuru II.
UHarding kanjalo nabanye abane okunguDJ van Rooyen, uStephan Nel, uJoshua Schultz no-Ockert Muller babhekene nezinsolo zokuhlasela izithandani ngomhlaka-3 Agasti endaweni okuthenga kuyo amakhasimende ahamba ngezimoto, eMontana, ePitoli.
INkantolo yMantshi yasePretoria North ngoLwesine ilalele ukuthi uHarding ushaywa njalo ejele nokuthi webelwa impahla yakhe.
OLUNYE UDABA:Babuyela enkantolo abasolwa ngokuhlasela izithandani kwa-KFC
Ummeli kaHarding uNols Nolte itshele inkantolo ukuthi: "UHarding useshaywe izikhawu eziningi webeklwa nempahla yakhe futhi akekho ofuna ukumsiza ngokuvula icala noma ukumsiza ngokudluliselwa kwelinye ijele."
UNolte ucele usizo lwenkantolo ngemuva kokuba uHardinge emtshele ngalezi zinsolo zokushaywa nokwebelwa impahla.
UHarding nguye yedwa ongadedelwanga ngebheyili kwasolwa nabo kuleli cala. UVan Rooyen, uNel noSchultz, ababenqatshelwe ibheyili yiMantshi uMothloki Rapulana, kodwa kuthe ngenyanga edlule izinto zabakhanyela.
INkantolo eNkulu yaseGauteng yadedela laba bobathathu ngebheyili yemali engu-R5 000 umuntu ngamunye.
UMuller yena wadedelwa ngebheyili ngo-Agasti.
Bonke abasolwa bobahlanu basolwa ngamacala okuzama ukubulala, ukushaya nokukhomba ngesibhamu.
Icala lihlehliselwe umhlaka-27 Novemba.